Kenya oo Safaraad Casri ah ka dhisatay Muqdisho [Halkee laga dhisay]
MUQDISHO, Soomaaliya - Safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya, Lucas Tumbo, ayaa sheegay inay Muqdisho ka dhisanayaan dhismaha Safaarad cusub, si loo dardar-geliyo howlahooda diblomaasiyadeed.
Safaarada Kenya ayaa horey u deganayd gudaha Hoteelka Jazeera ee Muqdisho, laakiin weerarkii lagu qaaday sanadkii 2015-kii kadib loo raray xarun ku taala nawaaxiga Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle, oo amaankiisa si weyn loo ilaaliyo.
Danjire Tumbo ayaa shaaca ka qaaday in dhismaha cusub ee safaaradooda noqon doono mid casri ah oo la dhisayay muddo billooyin ah, ayna rajeynayaan inay soo gaba gabeeyaan sanadkan.
“Hada waxaan si KMG ah ugu shaqeynaa dhismo ku yaala meel ku dhow garoonka Aadan Cadde, gaara ahaan Marine oo gaabiga ku haya dhismaha Shirka SKA,” ayuu Danjire Tumbo ku sheegay wareysi uu siiyay Wargeyska The Standard.
Dhanka kale, Safiirka ayaa wuxuu shaaca ka qaaday tirada Muwaadiniinta guud ee Kenya kaga sugan guud ahaan Geyigda Soomaaliya, isagooona carabka ku dhuftay inay ku kala sugan yihiin, Muqdisho, Hargeysa iyo deegaanka Jubbaland.
Muqdisho ayuu daboolka ka qaaday inay ka joogaan 3,000, Hargeysa, oo Somaliland ah ayuu tilmaamay inay ku sugan yihiin 10,000 halka deegaanka Jubbaland ayuu cod dheer ku sheegay inay kaga sugan yihiin 18,000 oo muwaadiniin Kenyan ah.
Dhamaantooda ayaa wuxuu ka dalbaday in si cabsi la’aan ah ay umaal-gishtaan Soomaaliya, maadaaam sida uu hadalka udhigay uu hada yahay dalka mid amaan ah oo xaaladiisa ay soo haageyso, taasoo uu tilmaamay inay AMISOM kaalin fiican ka qaadatay.
Ma cadda cid Kenya ku wareejisay dhulka ay ka dhisaneyso Safaaradeeda cusub, iyadoona warka kasoo baxay Safiirka Kenya uu imaanayo iyadoo Shacab badan oo ku dhaqan Muqdisho ay ka cabanayaan dhul-boob badan.
Dowladda Kenya ayaa kamid ah dalalka ay Ciidamadooda ka qeyb-qaadanayaan howlgalka Midowga Africa ee lagula dagaalamayo Al Shabaab, waxaana ay ku sugan yihiin Ciidankeeda Gedo iyo Jubbooyinka.
Safiirka ayaa sheegay in amaanka Muqdisho wax badan iska bedelay hadda, oo aysan jirin baqdintii hore, islamarkaana dalka ay ka soconayaan dib u dhis xoogggan.
Wuxuu intaasi ku daray in 35,000 muwaadiniin u dhashay Kenya ay hadda ka shaqeystaan Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya kamid ah kuwaasi oo ganacsato, macalimiin, shaqaale dhisamo iyo Ganacsato isagu jira.
Booliska Kenya oo qabtey Nin 53 jir ah oo Al-Shabaab u basaasi jiray
Afrika 08.03.2019. 16:42
Sirdoonka ayaa helay buug uu wato ninkan oo ugu qoran yihiin magacyada meelo uu booqday.
Cawad oo ka hadlay hadii Kenya ay Somaliland "ka taageereyso" ictiraaf
Soomaliya 05.06.2019. 08:35
Mareykanka oo Liiska Argagixisada ku daray Koox xiriir la leh Al Shabaab
Soomaliya 21.07.2018. 13:26